true communication /zu-ZA/tools-for-life/communication/steps/what-is-communication.html read 8 11 /tools-for-life-furl/imagecache/cropfit@w=3000/data/scientology-courses/files/certs/communication_zu_ZA.jpg UkuXhumana
I-acknowledgment kusho ukusho noma ukwenza okuthile ukukhombisa omunye umuntu ukuthi uzwile futhi wakuqonda ukuxhumana kwakhe. Isibonelo, i-acknowledgment kungaba “Kuhle kakhulu,” “Kulungile,” noma “Ngiyabonga.”
Le-drill ikufundisa ukuqonda noku-acknowledge okushiwo omunye umuntu. Iphinde ikufundise ukuthi i-acknowledgment kuyindawo yokuma, ukuphela kwaleyo ndlela yokuxhumana, hhayi ukuqala noma ukuqhubeka kokuxhumana.
Le-drill yenziwa kanjena:
I-coach: Khetha ibinzana encwadini elula yezindaba, enjengo Alice in Wonderland, bese uyifundela umfundi ngokuzwakalayo, ushiye lokho akusho noma akushoyo.
Wena: u-acknowledge lokho okushiwo ngumuntu.
I-coach: Uma wenelisekile umfundi u-acknowledged lokho okushilo, yithi “Kuhle.”
Phinda noma yiliphi ibinzana elingekho-acknowledged empeleni uze waneliseke ukuthi umfundi wakuzwa futhi waqonda lokho okushilo nokuthi ukuvuma bekushiwo ngendlela yokuqeda ukuxhumana. Bese uthi “Kuhle.” Khetha elinye ibinzana encwadini yezindaba bese uqhubeka ne-drill, uphinda lezi zinyathelo.
I-coach ithi “Qala” afunde umugqa. Uthi “Yilokho” ngaso sonke isikhathi lapho ezwa ukuthi kukhona i-acknowledgment okungafanele. Ube esemnika “Qala” okusha, ephinda umugqa ofanayo. “Yilokho” kungase futhi kusetshenziselwe ukumisa ingxoxo noma ukuqeda isikhathi se-drill. Uma isikhathi se-drill siphelile sengxoxo, i-coach kufanele athi “Qala” futhi ngaphambi kokuthi iqale kabusha.
1. Ama-acknowledgments afinyelela komunye umuntu ngendlela yokuqeda ukuxhumana.
2. Ama-acknowledgments akhombisa ukuxhumana kuzwakele futhi kwaqondakala.